Kana iwe uchida HDMI chiteshi pane yako 12-inch MacBook, heino imwe imwe sarudzo | Ndinobva mac
Haisi nguva yekutanga kuti tikupe ruzivo nezve rudzi urwu rwezvishongedzo uye ndezvekuti zvakanyanya uye zvakanyanya isu takatarisana nemamiriro ezvinhu anoda kuti isu titore mhando iyi yehubhu kana iwe uine MacBook iyo inotova neine chete USB madoko. - C, sezvazviri neazvino 12-inch MacBook uye nyowani Macbook Pro ine kana isina Kubata Bar.
Ndakazviona ndiri pachinzvimbo chekutsvaga sarudzo kuva neHTMLMI port pane yangu 12-inch MacBook nekuti ini ndiri kuenda kuibatanidza ne4K TV kuburikidza neHDMI. Kunyangwe zvangu zvidiki 12-inch MacBook Izvo hazvizokwanise kutora mukana weiyo 4K resolution sezvazvinofanirwa kuita, zvakafanira kuti ini ndibatanidze kwairi kuburikidza neHDMI.
Pawebhu pane zvakawanda zvingasarudzwa zviripo, kunyangwe kubva kuApple chaiko, asi dzimwe nguva, izvo zvaunazvo uchitenderedza nzvimbo yaunofamba zvinotarisa zvaunogona kana zvausingakwanise kutenga pane imwe nguva. Ndanga ndichitarisa pane akati wandei sarudzo uye imwe yeayo andinonyanya kufarira ndiyo yandinokuratidza pazasi. Ndezve USB-C hub kubva kuADAM brand iyo mukuwedzera pakupa iyo HDMI doko, inotipa maviri USB mhando A madoko, chiteshi che USB-C, chiteshi cheEthernet uye slot yemakadhi e SD.
Hapana mubvunzo kuti yakanaka kwazvo sarudzo uye ndeyekuti, sekune maapureta emaapuro, haina chero software yekuwedzera yekushanda nayo. Isu tinongofanirwa kuivharira mukati totanga kuishandisa. Muviri waro wakagadzirwa nealuminium uye ine tambo diki inoshanduka yekubatanidza kune komputa. Mutengo waro unosiyana zvichienderana nekuti unotenga kupi. In dandemutande iri unogona tenga ne $ 79,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook » Kana iwe uchida chiteshi cheHDMI pane yako 12-inch MacBook, heino imwezve sarudzo
Apple inoburitsa beta 7 ye macOS Yakakwira Sierra, watchOS 4 uye tvOS